Plus500 ဆန်းစစ်ခြင်းအွန်လိုင်း 2019 | အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ Plus500 - က ISO
ဣသရေလအမျိုး၌ 2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Plus500 အသက်အကြီးဆုံး CFD ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်း, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် cryptocurrencies အပေါ် CFDs များအတွက်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ CFD အကျိုးဆောင် Plus500 အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြထားတယ်: "ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုများအတွက်ကုန်သွယ် module - ယုံကြည်စိတ်ချရသောရိုးရှင်းသော, ဆန်းသစ်" ။
ဂရိတ်ဗြိတိန်, စင်္ကာပူ, ဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်သြစတြေးလျ: ယနေ့ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီလေးခုဈေး၌၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
စည်းမျဉ်း / လိုင်စင်
မှာရရှိနိုင် cryptocurrencies Plus500
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နှင့်အတူစာနယ်ဇင်း & ပူးပေါင်း. အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပံ့ပိုးမှု & Service ကို: အဘယ်သူမျှမတိုင်ကြားမှုများ
ဘယ်မှာငါ cryptocurrency ကုန်သွယ်များအတွက်စည်းကမ်းချက်များကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရှာတွေ့နိုင်မလဲ
နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်ဣသရေလအမျိုး Institute မှ - အဆိုပါကုမ္ပဏီ Technion ဟောင်းကျောင်းသားများကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်ရှိ 2000 ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကျော်ပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကုမ္ပဏီ, Plus500 Limited ကလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
Plus500 ၎င်း၏ဖောက်သည်ဆွဲဆောင်မှုအသုံးအနှုန်းများ, တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနှင့် tradable နောက်ခံ၏ကျယ်ပြန့ကတိပေးထားတယ်။
ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများနှင့် encrypt လုပ်ထားသည့်ဒေတာများထုတ်လွှင့်များ၏သီးခြားအုပ်ချုပ်မှုပါဝင်သည်သောတင်းကျပ်သောလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များ, သူတို့ရဲ့မြို့တော်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ clients များပေးရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားတှငျ, အနုတ်လက္ခဏာအကောင့်ခွင်ဖယ်ထုတ်လိုက်, ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းငွေပေးချေစေခြင်းမရှိတာဝန်ရှိနေကြသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထိုကဲ့သို့သောအာမခံရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Plus500 Group မှကိုယ်နှိုက်ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် CFD ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာ၏ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ တချို့အသေးတိုးတက်မှုလိုအပ်နေပါသည်ပေမယ့်ထပ်တိုးထောက်ပံ့ရေးနှင့်အနိမ့်ကုန်သွယ်အခကြေးငွေနှင့်တကွ, ပွဲစား, လမ်းအပေါ်ကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။
အလည်အပတ် Plus500 ယခု
သတိပေးချက်: လက်လီ CFD ကုန်သည်များ 80.6% ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး!
Plus500ဗြိတိန်နိုင်ငံ, Ltd အခွင့်အာဏာ & ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် FCA (#509909) ။
Plus500CY, Ltd အခွင့်အာဏာ & CySEC (# 250 / 14) ကထုတ်ပြန်ချမှတ်။
Plus500အဆိုပါစရဖ (# CMS100648-1) နှင့် IE ကိုစင်္ကာပူ (# PLUS / CBL / 2018) ကလိုင်စင်စင်ကာပူဒေါ်လာ Pte, Ltd ။
Plus500အာဖရိကသမဂ္ဂ Pty Ltd မှ (ACN 153301681),
အားဖြင့်လိုင်စင်ရ: သြစတြေးလျအတွက် ASIC, AFSL #417727, နယူးဇီလန်အတွက် FMA, FSP #486026; တောင်အာဖရိက, FSP #47546 အတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ Authorized ။
၎င်း၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်မတူဘဲ, eToro, Plus500 တရားဝင်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အခြေစိုက်သည်မဟုတ်သို့သော်၎င်း၏ဌာနချုပ်အဖြစ်ဟိုင်ဖာ, ဣသရေလအမျိုးကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖောက်သည်တစ်ဦးလျှင်£ 50,000 ၏ဗြိတိန်သိုက်ကာကွယ်မှုကိုလည်းကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်တွင်ဖောက်သည်သိုက်ကောင်းစွာပင်ပွဲစားများ၏ဒေဝါလီ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကာကွယ်ပေးနေကြတယ်သေချာတည်ရှိနေသေးသည်။ အမြဲဖောက်သည်စိတ်ချနိုင်သောတစ်ခုမှာရှုထောင့်ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေထဲကနေသီးခြားစီ client ကိုရန်ပုံငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဤဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ပွဲစားတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲစားအစဉ်အဆက်ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ပင်တစ်လိမ်လည်မှုကိစ္စတွင်သို့ရသင့်တယ်ဆိုရင်တောင်ဖောက်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့ပိုက်ဆံအဘို့ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါဘူး။ အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ မည်သည့်ရှေ့နောက်မညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှိခဲ့သည်လျှင်ဤကုမ္ပဏီအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများထုတ်ဖော်ရန်ရှိပြီးအဖြစ်, ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့သတိထားမိခဲ့ကြပေသည်။
€ 100 ၏အနိမ့်နိမ့်ဆုံးသိုက်အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှကမ်းလှမ်းချက်ကိုအညီအမျှဆွဲဆောင်မှုစေသည်။ အဆိုပါအခမဲ့န့်အသတ်သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်ပထမဦးဆုံးအချိန်ကစားသမားကျင့်သုံးခြင်းနှင့် playfully အမှန်တကယ်အကောင့်ဖွင့်ရှေ့တော်၌ကစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲ, နားလည်ရန်လွယ်ကူသောအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စတင်ရန်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါပေမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်းတိုင်းကိစ္စတွင်အတွက်အပြစ်တွေ၏တောင်းဆိုချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ tradable ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အကွာအဝေးကြီးမားသည်။
မှတ်စု: ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 80.6% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။ သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး၏မြင့်အန္တရာယ်ယူတတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားသင့်
"Highly အကြံပြု Plus500"
ကအစစ်အမှန်ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်ဘို့အနိမ့်ဆုံးသိုက် Plus500 debit နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်မဆို အသုံးပြု. € 100.- ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဘဏ်ကနေဖြင့်ပုံမှန်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းမှုအတွက်အနည်းဆုံးသိုက်တစ်€ 500.- အပေါ်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်
အရေးအပါဆုံးအရာတစ်ဦးချင်းအရောင်းအဆုံး၌ကွပ်မျက်စေနိုင်သည်ကိုမည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ WebTrader နှင့်အတူ Plus500 တလက်ပေါ်မှာ Flash ကိုဗားရှင်း၏အခြေခံပေါ်မှာပြုမူဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါရန်လုံးဝမလိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
တဦးတည်းလက်တွင်, ဒီမိုဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကို download အတွက်တိုးတက်လာသောတင်ဆက်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်ဒီနေရာကိုလိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဤသည်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ အလားတူပင်ဖောက်သည်သူတို့၏အဆုံးကိရိယာကိုတိုက်ရိုက်ပွဲစားရဲ့အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ပင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေကြသည် Plus500 စျေးကွက်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏။ အဆိုပါသင်တန်းများကို၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအဘို့အထဲသို့ပေါင်းစည်းယနေ့ကုန်သည်များမှတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ဆက်လက်ပေမယ်ပင်မိုဘိုင်းနှင့်အတူပြုလုပ်တာရှည်၏အားသာချက်ယူဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အများအပြား tools များ Plus500 ကမ်းလှမ်းမှုကို။
အဆိုပါစတိုးဆိုင်များတွင်အခမဲ့နှင့်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြီးသားက၎င်း၏အရည်အသွေးကိုရှင်းလင်းဘို့ဤရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်းလိုက်လျောဖို့လမ်းတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လာသည်။ ထက် ပို. သုံးလ၏လှုပ်ရှားမှု၏အမှု၌ 10 ယူရိုတစ်အခကြေးငွေကောက်ခံပါမည်။
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ, ဒါကြောင့်မအနားသတ်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ် Plus500။ cryptocurrencies အတွက်အများဆုံးသြဇာကိုလည်းများ၏အပြုသဘောဆောင်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ် Plus500 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။
ဤသည်ဖောက်သည်များရောင်းဝယ်ဖောက်ခွင့်ပြု Plus500 1 လီဗာ: တစ်2နှင့်အတူ Bitcoin ။ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးကိုအာမခံရပ်နား-အရှုံး function ကိုကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူမည်သူမဆို Plus500 အသက်ရှင်သောအကောင့်နဲ့တိုက်ရိုက်စတင်အပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တွင်သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဤအချိန်တစ်ခုန့်အသတ်ကာလအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဲဒီမှာကုန်သွယ်တစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦးကို virtual ငွေကြေး၏အခြေခံပေါ်မှာပြုမိသောမည်သည့်အန္တရာယ်, မပါဘဲ simulated နိုင်ပါသည်။
Beginners, အရှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုသည်ရှေ့တော်၌ထိုအသစ်သောမြေပြင်အနေအထားသို့ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရန်အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ created အခွင့်အလမ်းကနေနောက်တဖန်အချိန်အတှကျအကြိုးနှင့်။
ဖြည့်စွက်ကာ, Plus500 ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးရန်အနည်းငယ်သာပါဘူး။ သငျသညျသစ်ကိုအသိပညာရဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမရရှိနိုင်မျှ webinars သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤမယ့်တဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းထို site ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအနည်းငယ်အားနည်းချက်များသည်။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကောအသို့နည်း ယေဘုယျအားဖြင့်, Plus500 ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များပေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အားလုံးလုံခြုံငွေပေးငွေယူဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်အကြွေးကတ်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်အထက်။
ထို့အပွငျက e-ပိုက်ဆံအိတ် Skrill နှင့် PayPal က၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးမိနစ်အတွင်းပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ပေါ် 24 နာရီအတွင်းဒီလမ်းအတွက်တောင်မှတစ်ဦးပေးချေမှုမြေများ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် Plus500, 100 €၏နိမ့်ဆုံးသိုက်တွေ့ဆုံရန်။ သို့သော်ဒီယှဉ်ပြိုင်မှု၏ကမ်းလှမ်းမှုထက်အများကြီးနိမ့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ကဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုတိုးပွါးရာအရောင်းအများ၏အခြေအနေတွင်၎င်း၏ဖောက်သည်တစ်ဦးထံမှအပိုဆောင်းကြေးလိုအပ်ထံမှထို့အပြင်ပွဲစားရှောင်ကြဉ်။
clients '' ရန်ပုံငွေများဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဘဏ်များနှင့်အတူသီးခြားအကောင့်အတွက်စီမံခန့်ခွဲနေကြသည်နှင့်ပင်ဒေဝါလီ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ထုတ်ချေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်တစ်သိုက်အာမခံတည်ရှိ။ ရာထူး hedging အဘို့, Plus500 ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါ့အပြင်အခြားကုန်ကျစရိတ်ဖောက်သည်များကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ရာထူးများအတွက်အနားသတ်အဖြစ်သီးသန့်အစေခံထားတဲ့ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူငွေကြေးထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်။ Plus500 ထို့အပြင်ကုန်သွယ်များအတွက် Crypto-CFDs ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ CFD ပွဲစားများ၏ယခုအချိန်အတန်ကြာအဘို့, ဖောက်သည်များ Plus500 ထိုကဲ့သို့သောလွန်းကုန်စည်, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့်ညွှန်းကိန်းအဖြစ် underlying အပေါ်မှနျးဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။
ထို့အပြင်ပွဲစားလည်းအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာက၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှ cryptocurrencies ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးဖောက်သည်လူကြိုက်အများဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတချို့၏စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်မှနျးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
လောလောဆယ်အခြားအမှုအရာတို့တွင်ကုန်သည် CFD ကုန်သွယ်များအတွက်အခြေခံသက်ဆိုင်ရာအဖြစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အကြားအောက်ပါ cryptocurrencies ရှိပါတယ်:
ဤအဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနေဆဲသက်ဆိုင်ရာ crypto-CFDs အသုံးပြု. အမေရိကန်ဒေါ်လာဆန့်ကျင်သီးသန့်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုခံရနိုငျသျောလညျးဒီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ယူရိုဆန့်ကျင်နိုင်သမျှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။
ပြန့်ပွားခြင်း၏ငွေပမာဏကိုတဦးတည်းလက်ပေါ် variable ကိုနှင့်နောက်ခံဖောက်သည်ကိုရွေးကောက်ပြီး cryptocurrency ရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နောက်ခံ Bitcoin နှင့်အတူ crypto-CFDs အဘို့, ပြန့်ပွားမကြာခဏ 52.01 အချက်များဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကဏ္ဍအတွက်ထူးခြားသည့်ဖောက်သည် crypto-CFDs ကုန်သွယ်မှုနိုင်သည့်နှင့်အတူသြဇာပိုင်ဆိုင်မှု၏ဤအမျိုးအစားအဘို့အတော်လေးမြင့်သောအဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ 1 မှတက်: သင်တန်း၏, cryptocurrencies အလွန်တည်ငြိမ်သောဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားသောအရာ, 2, အလားအလာသြဇာ, တစ်ဦးကိုသိသိသာသာမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်း, သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးအရှုံးရလဒ်ကိုပေးထားပါတယ်။
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမရဲ့အထူးကုစာနယ်ဇင်းမှာအမြန်ကြည့်ယူကြကုန်အံ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့မဂ္ဂဇင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဆုအတွက်အစီရင်ခံစာများလည်းဘယ်လိုတာဝန်သိနှင့်ဖောက်သည်-oriented တစ်ပွဲစားလုပ်ရပ်များအပေါ်အလင်းကိုသွန်း။
ပထမဦးစွာကစာနယ်ဇင်းမဟုတ်သလိုကုန်သည်များအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများကိုမလိမ်လည်မှုအကြံပြုကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, လက်ရှိအသုံးပြုသူများပွဲစားရဲ့အမှုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုထက်ပိုပါတယ်။ ဥပမာ, Plus500 App Store မှာနဲ့ Google Play Store မှာကုန်သွယ် app ကိုအလွန်အပြုသဘော rated ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကုန်သွယ်ရေးစာနယ်ဇင်းများ၏ဖောက်သည်အာရုံထဲမှာ Plus500 ထပ်တလဲလဲအာရုံစူးစိုက်မှုသို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Plus500 Group မှ 2008 ကတည်းကစျေးကွက်အပေါ်တက်ကြွခဲ့စဉ်အမြဲထိပ်လူသိများတဲ့ပွဲစားတစ်ဦးအဖြစ်သူ့ဟာသူနေရာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
2015 ကတည်းကကုမ္ပဏီကပင်စပိန်ဘောလုံးကလပ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်၏အဓိကစပွန်ဆာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်တိုင်ကမသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်, ဒါ့အပြင်ဘယ်လိုငွေရေးကြေးရေးခိုင်မာတဲ့ပြသ Plus500 ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအမှု၌ကား, Plus500 ထောက်ခံမှုကိုလည်းပွဲစားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ပထမဦးစွာန်ထမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သည့်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းမှာကြည့်: အွန်လိုင်းချက်တင် e-mail,
Plus500 ထောက်ခံမှုကုန်သည်များ 24 / 7, 365 ရက်ပေါင်းတစ်နှစ်မှမရရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပျောက်နေပေမယ့်, သို့သော်, အွန်လိုင်းချက်တင်အတွက်မေးခွန်းများကိုလျင်မြန်စွာရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။ တောင်မှမှတ်ပုံတင်မထားတဲ့အသုံးပြုသူများချက်တင်မခေါ်, ပြီးတော့တစ်ဦးဝန်ထမ်းနှင့်တိုက်ရိုက် chat လို့ရပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ကာ, Plus500 ဒါ့အပြင်ကြီးမားတဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းနဲ့ passive သတင်းအချက်အလက်ပူဇော်သက္ကာကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သည်ကြီးများပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဝန်ထမ်းနှင့်အတူထိတွေ့ရရန်မလိုဘဲ 50 မေးခွန်းများကိုထက်ပိုပြီးဖို့အသေးစိတ်အဖြေကိုဖြေဆိုနိုင်ပါ။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက် Plus500 ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံကရှင်းပြသည်တရားဝင်လိုင်စင်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့် client ကိုရန်ပုံငွေများအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြသောလုံခြုံရေးယန္တရားဖော်ပြသည်။
သာ€ 100 နိမ့်ဆုံးသိုက်
PC ကွန်ပျူတာ, တက်ဘလက်, စမတ်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်
သင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုများနှင့် webinars အဘယ်သူမျှမ
အဆုံးမှာ၏ဘေးထွက်အပေါ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဟန်ချက်လည်းမရှိ Plus500။ ဒါဟာသင်ကောင်းတစ်ဦးပေးသွင်းသူထံမှမျှော်လင့်ထားမယ်လို့ bringseverything သူတစ်ဦးသည်အလွန်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးပေးသည်။
အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးအောင်မြင်မှုကျိန်းသေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပြီး Plus500 ဗြိတိန်နိုင်ငံ, Ltd ဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင် (FRN 509909) ကလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာပွဲစားထို့ကြောင့်ယင်း 4th ရာအရပျကိုသိမ်းပိုက် eToro အတွေ့အကြုံများငါတို့နှင့် CMC စျေးကွက်များ '' အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်လျော့နည်းယုံကြည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဘယ်အရာကိုကုန်သွယ်နာရီကုန်သွယ် cryptocurrency လျှောက်ထား? အခြေခံက "ဂန္ထဝင်" မတူဘဲအပေါ် cryptocurrencies Plus500 နာရီဝန်းကျင်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သာနင်္ဂနွေနေ့ကုန်သွယ်ရေးနှစ်နာရီများအတွက် 12 နာရီလောက်မှာထံမှပြတ်တောက်နေသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်, Plus500 ကြီးထွားလာ cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းတိုးတက်ရေးပါတီကနေအကျိုးခံစားရဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းအများစုကျယ်ပြန့်ကုန်သွယ်နာရီနှင့်အတူပွဲစားများတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိမ့်ဆုံးသိုက်ပင်နိမ့်မြို့တော်ကုန်သည်များ ပို. ပို. လူကြိုက်များ cryptocurrencies အတွက်ကုန်သွယ်မှုမှခွင့်ပြု, $ 100 ဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Plus500 PayPal က, Skrill နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သိုက်အပါအဝင်များစွာသောအခြားပေးချေမှု options တွေကိုပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါသရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်ကိုအပြီးတိုင်သုံးနိုငျတဲ့အချိန်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ထရေးဒင်းအကျိုးဆောင်များကအခမဲ့အားသွင်းထားတဲ့ကို virtual အကြွေးအတူပြုမိသည်။
Plus500 cryptocurrencies နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကုန်သွယ်သြဇာနှင့်ပြောင်းလဲနေသောန့်ပေးထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့်အလွန်မတည်ငြိမ်သော cryptocurrencies ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အခြေအနေထိုအချိန်အတောအတွင်းအတွက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေများ Website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီမှာ, Plus500 အားလုံးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများစာရင်းကိုပေးပါသည်။
သင့်လျော်သော CFD အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများန့်, ခရိုနီများနှင့်အခြား parameters တွေကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။
(မှတ်ချက်: CFD options များနှင့်အတူ, သင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုအခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်စရာမလိုပါ။ )
Tags: Forex ကုန်သွယ်စာအုပ်များ, အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ, ပေါင်း 500 စတော့ရှယ်ယာ, binary options များ plus500, plus500 cryptocurrency ပြန်လည်သုံးသပ်, plus500 သရုပ်ပြအကောင့်, plus500 Forex ကုန်သွယ်, plus500 နိမ့်ဆုံးသိုက်, Plus500 အွန်လိုင်းကုန်သွယ်, plus500 အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, plus500 ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်, plus500 ပြန်လည်သုံးသပ်လိမ်လည်မှု, plus500 ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Amelia cowles - သြဂုတ်လ 19, 2019 @ 10: 22
ဟုတ်ပါတယ်, ငါသညျငါ့အမြတ်အမှန်တကယ်ဘာမသိသောကြောင့်, သတ္တုတွင်းပြန် plusoption ကနေသူတို့ 19500 ယူဒါမှမဟုတ်တချို့ပိုပြီးတယ်။ binaryoptionassetrecovery ^ ** ပူးတွဲ (ဍ) ငါ့ကိုပြန်မရကူညီပေးခဲ့သည်။